About Us - Shandong Chen Lk mpiara mpitsabo. LTD
Shandong Chen Lu fitaovana ara-pitsaboana mpiara., LTD. Faritany ny tsara tarehy amoron-tsiraka tanàna ny atody, dia orinasa amin'ny fanjakana sakafo sy ny zava-mahadomelina fitantanana fankatoavana ny manokana dia anjara eo amin'ny fitsaboana, orinasa saha X-ray miaro fitaovana, fitaovana fikarohana sy ny fampandrosoana, ny famokarana ary ny varotra noho ny fampidirana ny -teknolojia avo orinasa. Anisan'izany, ny firenena patanty (patanty zl2014205451262), izay tsy miankina mandroso, dia afaka manamaivana ny fahatsapana firaiketam-po sy ny akanjo fiarovana Taratra maimaim-poana ny hopitaly.
Ny orinasa dia manaraka ny "manao ny marina no fototry ny fitokisana, tsara no loharanon'ny orinasa" fitsipika, miezaka ny velona amin'ny toetra, mikatsaka ny fampandrosoana amin'ny alalan'ny siansa sy ny teknolojia, ny olona-mifantoka, foana hanatsara ny vokatra tsara, fahafaham-po ny mpampiasa ny fepetra. Manara-penitra ny vokatra sy ny tonga lafatra rehefa avy-varotra fanompoana ny handresy mpanjifa. Isika hanolotra an-tanana ho amin'ny malalaka vahoaka ny mpanjifa sy ny mpivarotra mba hamoronana ny ampitso tsaratsara kokoa. Mandray ny mpanjifa sy ny mpivarotra na ny taratasy miantso midinika.